April 1, 2022 AdminLeaveaComment on मसँगै जापान जाने अनि संगै बस्ने एउटा इमान्दार केटा चाहियो (तुरुन्तै स’म्पर्क गर्नुहोस्)
म काठमान्डौमा बेचलर रनिङमा पढ्दैछु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमेन्ट हो । त्यसकारणा जापन जानको लागी मैले लगभग स’म्पुर्ण तयारी गरिसकेको छु । त्यसैले मैले यो सोचेकी म अब पढ्न जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगीसकेको छ ।
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडौको बसुन्धारामा नहि बसि रहेको छु । त्यस कारणा मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु परने भएको हुदा सोहिवमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा वि’वाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा आज मैले राम्रोअसल केटाको खोजिले गर्दा यो फेसबुक मार्फत सबैले जानकारी गराएको छु
पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ भन्ने विश्वासलागेको छ । आजकाल यस्ता खालका फेसबुक पोष्ट, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन भेटिन्छन् । त्यही विवरण हामीले यहाँ पेस गरेका हौँ । बिभिन्न अनलाईनबाट
रूसले शुरु गर्यो दोस्रो चरणको कठोर युद्ध ! ८ युक्रेनी हवाई वाहन र १ हेलिकप्टर खसाल्यो
अन्त्यमा पल को जीत समिक्षा जेल पल छुट्ने यस्तो तयारी
कै:दीहरुलाई आरामदायी बसाई र युवतीकाे पनि सुविधा रहेकाे अचम्मकाे जे:ल ! हेर्नुहोस् भिडियो